विप्लवका दाजु वीरजंग रिहा, भन्छन् : यही व्यवस्थाबाट परिवर्तन सम्भव छैन, फेरि हतियार उठ्न सक्छ | eAdarsha.com
विप्लवका दाजु वीरजंग रिहा, भन्छन् : यही व्यवस्थाबाट परिवर्तन सम्भव छैन, फेरि हतियार उठ्न सक्छ
नवलपरासी । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लका दाजु चन्द्रविक्रम चन्द (वीरजंग) रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत पश्चिम नवलपरासीको आदेश पछि उनलाई रिहा गरिएको हो । अदालतले २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न बिहीबार आदेश दिएको भए पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलो हुँदा शुक्रबार रिहा भएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य बाला थापाका अनुसार वीरजंग शुक्रबार जिल्ला अदालत पश्चिम नवलपरासीमा २५ हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् । उनी अहिले गृह जिल्ला कपिलवस्तु लागेका छन् ।
रिहाइपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य वीरजंगले अहिलेको व्यवस्थाबाट परिवर्तन सम्भव नभएकोले व्यवस्थानै परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो व्यवस्थाबाट परिवर्तन सम्भव छैन, दलाल संसदीय व्यवस्थालाई परास्त गर्न वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि संघर्षको विकल्प छैन ।’
वीरजंगले संघर्षका लागि जनता संगठित गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यो राज्य सत्ताले कस्ता रवैया अपनाउँछ सोही अनुसारको संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ ।’ उनले आफ्नो पार्टीले पुन हतियार उठाउन सक्ने संकेत समेत गरे ।
२०७६ असोजमा गिरफ्तार परेका उनलाई दाङमा १० महिना, काभ्रेमा १ महिना, भोजपुरमा १ महिना, संखुवासभामा १७ दिन, सुनसरीमा १९ दिन, ललितपुरमा १३ दिन, काठमाडौंमा २ दिन, पश्चिम नवलपरासीमा ८ दिन गरी त्यस पछि चितवन कारागार राखिएको थियो ।
जिल्ला अदालत नवलपरासीको आदेशमा उनलाई कारागारमुक्त गरिएको चितवन कारागारका प्रमुख जेलर कमलप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भनेर उनलाई २०७७ असोज २८ गते चितवन कारागारमा राखिएकोे थियो ।
अघिल्लोपटक कोभिडसमेत भएर कमजोर बनेका वीरजंगलाई घाँटी र पेटमा समेत समस्या आएको थियो ।
वीरगञ्ज आफू काराकारमा रहँदा आस्थाको बन्दी सरह व्यवहार भएको र कुनै यातना नदिइएको समेत बताए । उनी बम विस्फोटको मुद्दामा कारागार चलान भएका थिए ।
सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति भएपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु छुट्ने क्रम जारी छ ।
यसअघि वीरजंगलाई विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा बयानका लागि उपस्थित हुन रुपन्देही जिल्ला अदालतले २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
रिहा हुनु भयो, काराकारमा रहँदा कस्तो व्यवहार पाउनु भयो ?
– राजनीतिक आस्थाका बन्दी सरह व्यवहार भएको थियो । कुनै यातना दिइएन ।
अबको राजनीतिक लडाइँ के हुन्छ ?
– यही व्यवस्थाबाट देशमा कुनै परिवर्तन आउने वाला छैन । त्यसैले दलाल संसदीय व्यवस्थालाई परास्त गरेर वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । त्यही नै हो अबको बाटो पनि ।
– संघर्षकै बाटो हो । चुनावमा गएर यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । जनतालाई संगठित गरेर संघर्षमा नै जानु पर्छ ।
संघर्ष कस्तो खाले हुन्छ रु फेरि पनि हतियार उठ्छ कि ?
– यो राज्य सत्ताले कस्तो रवैया अपनाउँछ त्यस्तै खाले हुन्छ संघर्ष । देशका ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेश पलाएन भएका छन् । देशमा भएका युवाहरु जेलमा छन् । कोरोनाको विकराल अवस्थामा राज्यले कुनै उचित कदम चल्न सकेको छैन । यि सबै कुरा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । यो व्यवस्थाबाट परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले संघर्ष जस्तो पनि हुन सक्छ । राज्यको रवैयामा भर पर्छ ।
– उठ्न सक्छ । राज्यले गर्ने व्यवहार र रबैयामा भर पर्छ ।